Talo: sida loo ilaaliyo lambarka sirta ah ee Firefox | Laga soo bilaabo Linux
Talo: sida loo ilaaliyo lambarkaaga sirta ah ee Firefox
Maanta, dhammaanteen waxaan ka walaacsan nahay ilaalinta asturnaantayada. Dareenkan, Firefox ayaa laga yaabaa inuu yahay biraawsarka ugu fiican, gaar ahaan haddii kordhinta habboon loo isticmaalo. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo amniga "paranoia", dad badani waxay doorbidaan inay keydiyaan furayaashooda sirta ah si ay ugu fududaato helitaanka bogagga iyo adeegyada ay booqdaan maalin kasta. Tan macnaheedu waxa weeye in Firefox uu keydiyo dhammaan furayaashan sirta ah, laakiin sidoo kale in ku soo duushay uu aakhirka heli karo ...
Si aad u eegto furaha sirta ah ee horey loo keydiyey waad tagi kartaa Ikhtiyaarrada> Xulashooyinka> Amniga oo guji badhanka Furaha ayaa keydiyay.
Marka taa la dhammeeyo, xogta kal-fadhiga ee bogaggooda ay sirta ku kaydsan yihiin ayaa la taxi doonaa, laakiin furayaasha laftiisa lama soo bandhigi doono. Si aad u aragto iyaga guji batoonka Muuji ereyada sirta ah.
Tani waxay noqon kartaa mid khatar ah haddii ay dhacdo in qof uu la wareego kombiyuutarkaaga maadaama laga yaabo inuu wax xado ama arko DHAMMAAN ereyada sirta ah ee uu kaydiyay Firefox. Si tan looga fogaado, waxaa suurtagal ah in la dhigo carqalad amni oo dheeri ah: furaha sirta ah ee la codsan doono si loo arko liiska ereyada sirta ah ee la keydiyay. Si aad u awoodsiiso dejintan, kaliya guji ikhtiyaarka Isticmaal ereyga sirta ah (arag shaashadda koowaad).
Sanduuqa wadahadalka ayaa noo soo muuqan doona si aan u galno lambarkayaga sirta ah iyo voila. Dhamaan diyaar. Marka xigta ee qof uu doonayo inuu sirta galiyo sirtaada, ma awoodi doono inuu ogaado mooyee erayga sirta ah.
Tilmaam gaaban, fudud, waxtar leh oo wax ku ool ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Talo: sida loo ilaaliyo lambarkaaga sirta ah ee Firefox
Dhawr bilood ayaa laga joogaa markii aan soo galay dunida GNU / linux maalin walbana waxaan bartaa wax cusub. Waxaan horeyba u haystay Fedora 20 oo leh KDE kombuyuutarka kumbuyuutarka iyo Kubuntu oo ku yaal buuga shaqadayda. Boggan waa weyn yahay! Waad ku mahadsan tahay wax walba.
Waad ku mahadsantahay joojinta iyo faallooyinka ..
Caarada Pablito waa fiican tahay. Waxaan sidoo kale adeegsadaa erayga sirta ah haddiiba ay dhacdo .. Salaan 😉
Yup… gaar ahaan shaqada. 🙂
Caaradu waa fiican tahay, anigu kamaan aqoon .. ..and runtiina weligay ma jeclayn inay sahal tahay helitaanka xogtaas.
Sikastaba, ma keydiyo furayaasheyda sirta ah..waxaan kaliya u adeegsadaa kuwa kala duwan marinkasta..waxayna dhamaantood kujiraan madaxa ..
Ma aqaano hadii aan khayaano ahay laakiin waxaan had iyo jeer rakibaa Firefox marka ugu horeysa waxaan aadaa doorbidida amniga waxaanan ka tagayaa daalacashada gaarka ah waxaanan joojiyaa cookies-ka raadinta koox saddexaad oo waxaan soo dejinayaa addons-kayga amaanka marki wax walbana ay diyaar yihiin waxaan bilaabayaa daalacashada waxaanan moodaa goorta meelaynta daalacashada gaarka ahi ku weydiin mayso inaad rabto inaad keydiso furaha sirta ah, markaa si aan ugu raaxaysto oo aan u nabad galo, soo dejiso addons-ka tifaftiraha sirta ah ee aan badbaadiyey oo aan u arko inuu faa'iido badan leeyahay oo aan badbaado u leeyahay badbaadinta lambarka sirta ah ee goobaha la doonayo mar walbana aan ku weydiisto lambarka sirta ah si toos ah u geli macluumaadkaaga iyo furahaaga sirta ah waan kugula talinayaa adiga iyo kuwa jecel amniga waxaan kugula talinayaa addonskan
adblock oo lagu daray (xayiray asturnaanta)
anonymoX (qariso asalkaagii hore ip)
qarsoodi (waad tirtiri kartaa cookies buskud)
ghostery (wuxuu ka ilaaliyaa bogagga gurguurta)
https meel kasta (waxaad marwalba daalaysaa https ka aamin ah)
noscript (oo leh firfircoonaan ma awoodi doontid inaad dhex mariso dhowr bog laakiin waad isku habeyn kartaa liis cad)
Tifatiraha sirta ah ee keydsan (maaree oo xafid aamin lambarkaaga sirta ah ee boggaga aad ugu jeceshahay)
ka raali noqo adblock plus (xannibaadaha xayeysiinta)
+1 .. ..Sida saxda ah fiilooyinka aan doorbido, ku taliyo oo aan isticmaalo ..
Waa hagaag, wixii ka baxsan xagjirnimada, iyagu waa ikhtiyaarro nabadgelyo oo wanaagsan, si kastaba ha ahaatee waxaad seegtay mid aad muhiim u ah oo ku saabsan: iskuxirka qaabeynta jaangooyada. Tani waxay joojineysaa geolocation-ka oo ku shaqeeya firfircoonaan ahaan FIrefox. Marka la eego adblock-ka, waxaan isticmaalaa adblock Edge iyo liisaska: EasyList (BLoquea advertising) EasyPrivacy (BLoque trackers) FanBoy's Social Blocking (wuxuu xirayaa badhanka bulshada ee sidoo kale trackers) Liis gareynta Malware Domains (Goobaha xayiraada leh malware). Sidan ayaa boggaga deg-degga ah u rartaan si dhakhso leh (MA DARAJIYAAN xayeysiinta ama khadadka bulshada ama raad-raacayaasha). Salaan. 2
Liiska wanaagsan !! Waxaan sidoo kale kugula talinayaa inaad Disconnect u beddesho ghostery, iyo MaskMe si aadan u siinin emaylkaaga si farxad leh
Waa maxay fidinta aad ku talinaysaa si loo ilaaliyo arimaha gaarka ah? Mahadsanid
Kuwa ku xusan "hello" faalladaada. 🙂
Talo aad u fiican
Ikhtiyaar kale oo suurtagal ah oo xoogaa adag laakiin sidoo kale guud ahaan guud waa in la isticmaalo keepass2, halkaas oo aad ku keydin karto oo keliya ereyada sirta ah ee bogagga shabakadda.
Qalabka keydka ee loo yaqaan 'keefox plugin' (oo ka socda Firefox) waxaad ku xidhi kartaa Firefox iyo keepass2 oo aad ku wada haysataa dhammaan ereyada sirta ah ee Firefox
waxaa jira waxyaabo loogu talagalay daalacashada kale sidoo kale
Waad ku wadaagi kartaa keydka macluumaadka kaydinta buug-yaraha, isku-duwaha bitorrent ama wax kasta oo aad ugu jeceshahay, isla markaana waxaad ku haysataa isku ereyo isku mid ah
waxay leedahay app loogu talagalay android sidoo kale
Ku jawaab marcoshipe
Hadda waxaan u adeegsanayaa Maxthon 4 dhanka Linux waxayna i siisaa amaan aad uga badan kan Firefox.
Aad ayey waxtar ugu leeyihiin dadka keydsada furayaasha sirta ah. Laakiin maadaama aanan isticmaalin xulashadaas, markaa, xitaa dan kama lihi.
Marwalba waan arkaa xulashadan markii Firefox ay cusbooneysiineyso waxaanan arkay qaybaha bogagga aan sida joogtada ah u booqdo waana iska ilaawaa furaha sirta ah. Laakiin waligay iguma soo dhicin in taasi ay ahayd waxa loogu talagalay, marwalba waxaan u maleynayay in ay u isticmaali doonto isla eray isku mid ah bogagga oo dhan. (Laakiin sida jaahil ii ah)
Keliya ma aadan ahayn walaal. Waxaan sidoo kale u maleeyay isku mid.
Hadda waxaan galayaa Habeenki oo waan hagaajiyaa.
Ku jawaab lastnewbie
Maqaal wanaagsan, salaan.
Lagu Darso Kuwa Loogu Jecel Yahay, inkasta oo shakhsiyan aan doorbido xoogaa kordhin sida Lastpass ah oo aan ku maareeyo.
Wanaagsan! Waad ku mahadsantahay caarada.
Jose L. Mariscal Zapata dijo
Waan garanayay si indha sarcaad leh in la samayn karo, laakiin cabsida ah "kala bood" ayaa dib ii dhigtay oo aan joojiyay.
Aad baad ugu mahadsantahay barashadaada. Waxaan raacayaa boodhka dushiisa haatan.
Waxaan ku sugnaa dunidan cajiibka ah ee Linux dhowr bilood waxna waan u baranayaa si tartiib tartiib ah.
Marwalba waan xallin jiray, sifiican sida wanaagsan, Windows, laakiin waxaan horeyba uga daalay sheekooyin badan iyo welwelka joogtada ah ee fayrasyada, cusbooneysiinta, barnaamijyada cusub ee lacag bixinta, iwm.
Hadda waxa aan raadinayo waa codsi, oo la mid ah Sony's PMB, si loo awoodo in loo farsameeyo fiidiyowyada.
Haddii qof i caawin karo, waa maxay magaca dalabka iyo meesha laga soo dejisto, waan ku qanacsanahay.
Jawaab Jose L. Mariscal Zapata
Whoscall by LINE ayaa kuu ogolaaneysa inaad aqoonsatid oo aad joojiso wicitaanada
Sida loo ciyaaro Scrabble-ka Linux (100% Isbaanish)